I-R & D - Ningbo Runner Co., Ltd.
I-01 WRN INSTITUTE YOKUPHILA
--- Gxila ocwaningweni lobuchwepheshe bomoya obuphathekayo
Ipulatifomu ye-Air duct / Ukuhlolwa kokusebenza kwesihlungi / ukuhlolwa kokushintshaniswa kokushisa
Ukuhlaziywa kwemisindo yomsindo / ukuhlolwa komehluko we-Enthalpy
02 Gxila kubuchwepheshe obuholayo
Inkampani inabanjiniyela be-R & D abaqeqeshiwe ababambe iqhaza emkhakheni wokuhlanzwa kwezinto ezintsha, ukwakhiwa kwezimboni, ukwakheka kwesikhunta, ukulawula okuzenzakalelayo, ukuhlaziywa kokuhlolwa nokuphathwa kwephrojekthi, ukuhlinzeka ukwesekwa kwabasebenzi emisha yayo ezimele kanye nokuguqulwa kwempumelelo yesayensi nezobuchwepheshe. Ukuncika eqenjini layo eliqinile le-R & D kanye nesipiliyoni somkhiqizo ocebile ekuthuthukiseni nasekuklanyeni komkhiqizo, ukukhiqizwa komkhiqizo weNkampani nokulawulwa kwekhwalithi kungahlangabezana nezidingo zamakhasimende nezemakethe kangcono.
Iphrojekthi yefilimu eluhlaza
Amandla angenalutho angenalutho
03 AMANDLA EZIQINISO
--Ubuchwepheshe bobuchwepheshe obuhle
Ucwaningo lobuchwepheshe oluqhubekayo kanye namasu amasha okuncintisana yi-WRN. I-WRN ithole amalungelo obunikazi angaphezu kwayi-100 asemthethweni nakwamanye amazwe emkhakheni wezinto ezintsha, ukwelashwa okuluhlaza okotshani, ukuhlanzwa komoya, uhlelo oluphakathi lokungenisa umoya, ubuhlakani, njll. Sesisungule izikhungo ezinjengeLivable Air Institute neSurface Treatment Institute. Ngokuqamba ubuchwepheshe kanye nocwaningo, singabona ikusasa lethu ngokuya ngemakethe.
I-NingBo / ZheJiang
Ithimba lobuchwepheshe bezamabhizinisi
Isikhungo sokucwaninga ngamabhizinisi